I-Grand Theft Auto I-GTA 6 PS4 I-PlayStation 4 | Izintaba ezinkulu, iJizera Mountains, iPharadesi iPharadesi
IkhayaI-Grand Theft Auto I-GTA 6 PS4 I-PlayStation 4
25.2.2018 by PetrPikora.com
Grand Theft Auto(I-GTA) kuyinto uchungechunge lwamageyimu wekhompiyutha adalwe yi-Digital Eclipse, i-Rockstar North (eyayiyi-DMA Design), i-Rockstar Leeds, ne-Rockstar Games. Uchungechunge, ingxenye yokuqala eyakhululwa ku-1996, ihlanganisa imidlalo eyishumi nesishiyagalombili kanye nezandiso ezine. Ingxenye ibizwa ngokuthi i-Race'n'Chase, futhi yayiyigeyimu ye-2D lapho ubalekele khona emaphoyiseni. Le ngxenye ihlelwe kabusha ku-Grand Theft Auto ku-1997. Abalingiswa abakhulu balo mdlalo kwakuyizinkanyezi zaseHollywood, njengoMichael Madsen, uSamuel L. Jackson, uJames Woods, uJoe Pantoliano, uFrank Vincent, uRobert Loggia noRay Liotta. Izwi likaMikhail Faustin ku-GTA 4 lenziwa ngumdlali weCzech uCalel Roden.Grand Theft Auto
Umdlali wakhiwe njengengxenye yeqembu le-gangster edolobheni elikhulu, elikulo mdlalo kancane kancane likhuphuka esigabeni sobukhosi se-gangsta ehleliwe. Uma wenza imisebenzi ehlukile, umdlali ufunda nge-underworld yobugebengu yedolobha. Uvumele ukuphanga kwasebhange, ukubulala kanye nezinye izenzo zobugebengu, kodwa futhi angaphuma, asindise abantu, abambe izigameko, agibele itekisi, ahlanganyele emidlalweni yomgwaqo, noma afunde ukushayela indiza nezindiza. I-Grand Theft Auto Series idume ngenkululeko yaso enkulu emdlalweni ongahola ngokulinganayo kuze kube sekugcineni ngendlela eyodwa kuphela, kodwa abadlali banganquma ukuthi bazokwenzani nokuthi yimiphi imisebenzi abazoyenza.
Okuthunyelwe kwangaphambilini U-ZOH 2018, u-Ester Ledecká unegolide lesibili
esihlokweni esilandelayo Ithimba le-Piano Melody
Ngazise ngamaposi amasha nge-imeyili.